Ny Semalt dia manolotra tsikombakomba tsotra mba handrafetana ny User Registration Spam User Registration
Ho an'ny mpampiasa WordPress vaovao, dia mety hahazo fampahafantarana maro momba ny kaonty kaonty hosoka vaovao hita ao amin'ny tranonkalanao WordPress ianao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ireo tranonkala spam izay mitondra ity trafikana avy amin'ny domains amin'ny adiresy spam. Zava-dehibe ho an'ny tompon'ny tranonkala tsirairay ny hampitsahatra ny spam WordPress.
Ny sasany amin'ireo tetika ampiasain'ny olona mba hisorohana ny spam WordPress dia azo jerena ao amin'ity torolalana SEO ity izay nomen'i Jack Miller, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt .
Azonao atao ny manajanona ny asan'ny spam botso toy ny fisoratana anarana an-tserasera. Ireo dia ireo logins navigateur maloto izay tsy voatery avy amin'ny mpitsidika olombelona. Ny spambots dia manandrana mamitaka ny rafitra ho toy ny tena mpitsidika ara-dalàna. Azonao atao ny manakana ny spam WordPress amin'ny fampiasana sasantsasany amin'ireo teknika etsy ambany:
1. Ampifanaraho ny anjara-toeran'ny anjara User User amin'ny WordPress
Ny fomba iray ahafahana manakana ny WordPress spam dia afaka manova ny fampiasana fanoratana ny mpampiasa. Rehefa misokatra ho an'ny olon-drehetra io safidy io dia afaka manokatra kaonty vaovao ny botnets. Io endri-javatra io dia miteraka amin'ireo fanamarihana maro manohintohina momba ny kaonty user vaovao. Mba hahatratrarana izany, midira ao amin'ny kaontinao WordPress ary mandehana any amin'ny sehatra isafidianana. Avy amin'ity fizarana ity, tsindrio ny bokotra 'mpikambana'. Amin'izany fomba izany, tsy misy olona afaka misoratra anarana amin'ny kaonty ao amin'ny tranokalanao. Raha hamela ny fisoratana anarana, dia azonao atao ny mametraka ity bokotra ity mba hisoratra anarana. Ny safidy azo ampiasaina dia afaka manolotra fomba azo antoka ahafahana manokatra kaonty vaovao amin'ny tranonkala..
2. Mampiasa ny firaketana fanoratana anarana
Ho an'ny mpizahatany izay mila mpampiasa hisoratra eo amin'ny tranonkalany, dia tena ilaina ny mamorona endrika fisoratana anarana. Ny endrika fanoratana manokana dia afaka miady amin'ny vokatry ny spam bots izay afaka mamorona kaonty vaovao. Ny fomba famoronana manentana ny endrika fanoratana manokana dia mety hampidirina amin'ny fampiasana ny adiresy fanoratana ny mpampiasa WordPress. Azonao atao ny mahazo ny endrika azo antoka kokoa noho ny format default Default Word. Karohy, fametrahana ary manantona plugin forma fisoratana anarana. Avy amin'io menio io, afaka mamorona ny endrika fanoratana anao ianao.
3. Alefaso ny fidirana an-tserasera
Ny fanamafisana ny asan'ny rohy fanentanana an-tserasera dia mety ho fepetra fiarovana tsara azo atao. Ireo spambots dia tsy afaka mandà ity fepetra fiarovana ity, tsy toy ny mpitsidika olombelona. Ity toerana ity dia midika fa ny mpampiasa dia tokony hanana adiresy mailaka marina. Hatramin'izao dia tsy maintsy afaka manindry ny rohy fidirana izay alefa any amin'ny adiresy mailaka fanamarinana azy ireo. Raha hamela an'io endri-javatra io ianao, dia azonao atao ny mamela ny mailaka avy amin'ny menan'ny fanamarinana mpampiasa. Mba hahatongavana amin'io toerana io dia mandehana any amin'ny 'fampandrenesan'ny mpampiasa.'
4. Ampiasao ny fidiran'ny admin
Ny tranonkala sasany dia mety tsy manana mpampiasa maro. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny manapa-kevitra ny hanaraka ny kaonty amin'ny mpampiasa. Azonao atao ny manaiky na mandà ny fisoratam-peo an-tsompitra eo amin'ny fangatahana eo ambanin'ny fanovana ary avy eo ny fisoratana anarana. Ity fomba tsotra ity dia mora ampiasaina, ary ny olona dia afaka mifehy ny mailaka mahazo ny kaontin'ny mpampiasa.
5. Ampiasao ny code captcha
Ny Kapchas dia mametraka loharanom-panoratana anarana amin'ny tranonkala madio fototra. Azonao atao ny manakana ny spambots WordPress amin'ny alalan'ny captcha. Ireo tetikasan'ny Human Intelligence ireo dia miantoka fa ny olombelona ihany no afaka mandingana izany fanamarinana manokana izany Source .